Raha vao tsy voakolo ny tarehy dia ho very mian-dalana izay firafitry ny tarehy izay. Soa fa azo hahemotra amin’ny alalan’ny otra izany. Ireto avy ny atao :
Dingana voalohany : Orina miakatra amin’ny fela-tanana miainga eo amin’ny saoka mankany amin’ny sofina ny takolaka manontolo. Toy izany koa ny eo amin’ny firihifana ary ny eo amin’ny handrina. Atao mivelatra tsara ny fihetsika. Averina im-betsaka.
Dingana faharoa : Ny fela-tanana ihany no miasa eto. Kosehina mafy miainga avy eo ambany no miakatra ny tapany ambany amin’ny takolaka.
Dingana fahatelo : Tsindriana mandritra ny 4 ka hatramin’ny 7 segaondra ny teboka telo hita eo amin’ny sary, manaraka ilay taolan’ny pomety.
Dingana fahaefatra : Tsongoina amin’ny ankihibe sy ny fanondro ireo teboka voatondro ao anaty sary. Atao tonga hatrany amin’ny sofina mankany amin’ny saoka.
Dingana faha dimy : Tsindriana amin’ny fanondro sy ny fanondro adala ao ambadiky ny sofina dia asadika ny tanana dia orina amin’ny felan-tanana ny tenda ka miainga eo amin’ny sofina mankany amin’ny tapany ambany amin’ny tenda.